Erdogan oo Mareykanka ku yeri xaq uma lihidiin inaad sii joogtaan Suuriya – Daily Som
Madaxwaynaha Dalka turkiga rajab Deyib Erdogan ayaa dhaleeceeyay Joogitaanka Maraykanka ee Waqooyika Suuriya.
Hadal uu Baahiyay kanalka NTV ee garka loo leeyahy isag oo soo xiganaya Khudbad uu madaxwayne Erdogan ka jeediyay Xaflad ka dhacday Caasimada Ankara, ayuu ku dhaleeceeyay kus ii sugnaashaha Maraykanka ee Waqooyiga Ciraaq.
“Waxay sheegaan inaysan ka tagi doonin Manbaj, laakiin iyagu xuquuq uma laha in ay kus ii sugnaadaan ” ayuu yiri Madaxwayne Erdogan.
Hadalka madaxwaynaha Dalka Turkiga ayaa imaanaya maalmo ka dib markii bayaan ka soo baxay Wasaarada Difaaca Maraykanka lagu sheegay in aysan ka bixi doonin Manbaj, inkasta oo ay jirtay Dalab Dhanka Ankaro ah.
Cutubyo ka tirsan, Kooxda difaaca dadka ee Kurdida, ciidamo maraykan ah ayaa gacanta kuhaya Manbaj. Laakiin Ankara Kooxdaasi kurdiyiinta ee Waqooyiga Suuriya iyo Ciraaq ku sugan deegaanadooda waxaa ay aaminsan tahay in ay kooxda Argagaxisada PKK ay hoy u tahay.
Erdogan oo Mareykanka ku yeri xaq uma lihidiin inaad sii joogtaan Suuriya added by Staff on March 21, 2018